कष्टको बिचमा पनि प्रचार (१ थेसलोनिकी २ः१-९) – Bible Study
पद १. थेसलोनिकीका मानिसहरुले पूर्ण रुपमा सुसमाचार ग्रहण गरेको कारण पावलको परिश्रम व्यर्थ भएको छैन । तिनीहरु बोलीले मात्र होइन तर व्यवहारले साचो रुपमा ख्रीष्टको अनुकरण गर्दै थिए । प्रचारकमा हुनैपर्ने एउटा गुण भनेको साचो जीवनशैली हो । यद्धपि थेसलोनिकीको मण्डली पहिले पनि थियो, तर पावलको आगमनद्वारा झन प्रभावकारी भयो । यसो हुनुको कारण पावलको आचरण र साँचो जीवनशैली पनि हो ।
तैपनि कतिपय अजान समुहले पावलको विरोध गरिनै रहे । ती समुह मण्डलीभित्र वा बाहिरबाट हो भन्ने निश्चित छैन । तिनीहरु यहूदीहरु हुन सक्छन् जसले पावलको काम नाश गर्न निरन्तर सुरुदेखि नै लागिपर्थे । अथवा तिनीहरु भूmटा प्रेरितहरु हुन् जसले त्यस बेला कोरिन्थ र गलातियाका मण्डलीहरुलाई बहकाए । सायद थेसलोनिकीका कतिपय मानिसहरुले पावलको वास्तालाई संका पनि गरे ।
पद २. गोप्य विश्वासीले धेरै मानिसहरु प्रभुमा ल्याउन सक्दैछ । तर पावल अप्ठ्यारोमा पनि साहसीलो भई प्रचार गरे र धेरैले विश्वास गरे । त्यस बेलाको रोमी सतावटलाई हलुका रुपमा लिन मिल्दैन । तिनीहरुले पावललाई विनाकारण पक्राउ गरे, कपडा उतारे र सार्वजानिक रुपमा पिटे । रोमी नियम विपरित नै पावललाई झ्यालखानामा हालियो यातना दिइयो । यस्तो हुदा पावलमा वास्तवमा कुनै दोष हुदैनथियो तर उल्टै उनलाई दोष्याउनेहरुले सत्यता ढाकछोप गर्थे । थेसलोनिकीमा उपस्थिित हुदा पनि पावल सायद घाइते अवस्थामा नै थिए होला । धेरै “घोर विरोध” आए तापनि साहसी हुनुको कारण परमेश्वर नै हुनुहुन्छ । परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयता नै इसाईहरुको सासहको मुख्य श्रोत हो । धेरै पटक हामी सेवा गर्दा सानोतिनो कुरामा पनि विचारशील र होशियारी भई आफ्नै उपाए लगाउछौँ । तर पावल भने साहरी भई प्रभुमा भरी प्रचार गरे यद्धपि उनको सन्देश लोकप्रिय भने थिएन । पावलले आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ वा प्रख्यात हुनको निम्ति यसो गरेका थिएनन् ।
पद ३. पावलको प्रचार कुनै सिद्धान्त, दर्शनशास्त्र, वा मानिसको विचारबाट परिचालित थिएन । तर केवल परमेश्वरको वचनद्वारा भएको थियो, जुन कुरा आजको युगमा ज्यादै कम छ । परमेश्वरको पूर्ण वचन प्रचार नगरेर आधि सत्य मात्र प्रचार गर्नु पनि धेरै हानिकारक हुदछ । यहाँ पावलले मानिसलाई प्रसन्न पार्न प्रचार नगरेर परमेश्वरतर्पmबाट गर्दै थिए, किनकी मानिसबाटको लोकप्रियता क्षणिक हुदछ ।
यस पदमा “छलकपट”(ग्री. डोलो) भन्ने शब्दको अर्थ एक जालहारीले पासो राखेर माछा पक्रेको जस्तो हो । पावलले कुनै चलाखी वा छल गरेर मानिसलाई झुक्याउन खोजेका थिएनन्, वा कुनै अशुद्धताबाट पनि यसो गरेका थिएनन् । त्यस समयमा सहरभरी नै विभिन्न मन्दिर र प्रतिमाहरु थिए जस्तै अपोल्लो, जिउस्, एरिस्, अफ्रोडिट्स, अस्तारे, आदि । त्यहाँका मन्दिरका पूजाहारीहरु व्यविचार र अशुद्धताले भरिपूर्ण थिए जसका नैतिक पतन भइसकेको थियो । यस पत्र लेख्दा पावल कोरिन्थमा थिए जसको वातावरण पनि यस्तै थियो ।
पद ४. जसरी एक सुनारले सुनको सिद्धता जाँच गरी उचित मुल्य ठहराउछ, त्यसरी पावलाई पनि परमेश्वरले सुसमाचारको निम्ति योग्य ठान्नुभयो । सुसमाचार सुनाउनु पावल आपैmले रोजेको कर्म थिएन, त्यसैले उहाँलाई प्रसन्न पार्न नै पावल लागिपरेका थिए । आज उहाँले हामीलाई पनि उहाँको सत्यता दिनुभएको छ । यस कुरालाई हामी कसरी उपयोग गर्दैछौ भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ । आज उहाँले हामीलाई सुसमाचार सुम्पनुभएको छ, र उहाँलाई प्रसन्न पार्नु नै हाम्रो भार हो । तर यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ कि उहाँले हामीलाई जे सुम्पनुभएको छ, त्यसको जवाफदेही हामी हुनेछौ (हिब. १३ः१७) । किनकी जति तोडा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसको ब्याजसहित उहाँले आशा गर्नुहुन्छ ।
परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु एक गम्भिर विषय हो । आज इसाईहरुले “के यसो गर्नुहुन्छ ?” भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा बरु यस कुराले परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आजको युग प्रविधीको युग हो जहाँ विभिन्न माध्यमबाट संसारिक र इश्वरहिन कुराहरु मानिसभित्र प्रवेश गर्ने गर्छ । यस्ता कुराहरुबाट परमेश्वर साच्चै प्रसम्न हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनी विचार गर्न आवश्यक छ ।
यहाँ पावलले जेजति गरे त्यसको श्रेय परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो । हामीले गर्ने कुनै पनि सुकर्मको श्रेय हामीले लिनुहुन्न । किनकी यदि हामी आपूm–केन्द्रित नभई उहाँको निम्ति काम ग¥यो भने धेरै कामहरु गर्न सक्छौँ । पावलले जहिले पनि परमेश्वरबाटको स्वीकृती खाजे (गला. १ः१०) । मानिसबाट निगाह प्राप्त गर्न पावलले कहिल्यै सुसमाचारसँग सम्झौता गरेनन् । तैपनि असल कुराको निम्ति सकैसम्म मानिसलाई खुशी पार्ने कुरामा पनि पावल चुकेनन् (२ कोर. ९ः२०–२२; रोम. १५ः२) ।
परमेश्वर सबैको हृदय जाँच गर्नुहुन्छ, र प्रमाणित गर्नुहुन्छ (भजन. १७ः३; यर. ११ः२०; प्रे. १ः२४) । “हृदय” भनेको मानिसको सबैभन्दा गहिराइमा हुने कुरा हो जसको तलाश उहाँ गर्नुहुन्छ ।
पद ५. “खशामदी” भन्नाले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति चिप्ला कुराहरु गर्नु हो । यसो गरेर पावलले कहिल्यै मानिसमाथी प्रवाह जमाउन चाहेनन् । त्यस बेलाका सुरुका मण्डलीमा यस्ता प्रचारकहरु धेरै थिए जसले रुपियाँपैसाको निम्ति इसाइत्वलाई बेचेका थिए । यसरी देखावटीपनमा जिएर जीविकोपार्जन गर्ने धेरै थिए जुन आजको युगमा पनि देख्न सक्छौँ ।
“लालच” गर्नु भनेको आफ्नो अधिकारमा हुनेभन्दा ज्यादै प्राप्त गर्न चाह गर्नु हो । यस्तो कुराको विरुद्ध दश आज्ञामा पनि उल्लेख छ (प्रस.२०ः१७) । बाइबलमा धेरै कुराहरु गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ, तर “लालच” भनेको यस्तो कुरा हो जसलाई मनाही गरिएको छ । यहाँ पावलले यस्ता कुराहरु परमेश्वरको सामु राखेका छन् जसले हृदय जान्नुहुन्छ ।
पद ६. यहाँ पावलले कुनै प्रेरितिय अधिकार प्रस्तुत गरेका छैनन् । पद ५–६ मा उनले नगरेका कुराहरु छन् भने पद ११ मा के गरे भन्ने कुराहरु छन् । उनी कसैको निम्ति आर्थिक बोझ पनि भएनन् ।
पद ७. पावलले आफ्नो सेवा बालक स्याहार्ने धाइ–आमासँग तुलना गरेका छन् । आमाले आफ्नो सन्तानाई करकापमा सेवा गर्दैनन् तर निस्वार्थ प्रेममा गर्छिन् । वास्वमा केही समय पहिले मात्र थेसलोनिकीका मासिनहरु पावलको निम्ति अजान थिए । तर तिनीहरुसँग भेटेपछि प्रेमको मुकुटसरह भएको छ । उनले गरेकोजस्तो उत्कृष्ट प्रेम हाम्रो जीवनमा पनि हुन आवश्यक छ । जसरी चराचुरुङ्गीहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई पखेँटाले छोपेर न्यानो बनाउछ र सुरुक्षा दिन्छ, थेसलोनिकीहरुप्रति पावलको वास्ता पनि त्यस्तै थियो (व्य. २२ः६; भजन. ९१) । आज हामी इसाईहरु अरुलाई प्रभुमा खुवाउने गर्छौ भने हामी आपैm पनि असल कुराहरु खान आवश्यक छ ।
पद ८. पावलले केवल सुसमाचार मात्र दिएनन्, तर आपैmलाई तिनीहरुका निम्ति अर्पण गरे । यो अति नै महत्वपूर्ण कुरा हो । धेरैपटक हामी कर्तव्य सम्झेर मात्र सेवा गर्ने गर्छौ तर समर्पित हुदैनौ ।
पद ९. पावलको परिश्रम बोलीमा मात्र नभएर शारिरीक रुपमा नै मेहेनत गरे । त्यस बेलाको समयमा मानिसहरु दिनको बाह्र घण्टामासम्म काम गर्ने गर्थे । त्यसकारण यहाँ “दिनरात” भन्ने शब्दले धेरै परिश्रम बुझाउछ (१ थेस. ३ः१०; २ थेस. ३ः८; १ तिमो. ५ः५; २ तिमो. १ः३; प्रे. २०ः२१) । उनको हृदय नै सेवा गर्ने भएकोले परिश्रम गर्ने कुरामा कहिल्यै पछि परेनन् ।
Tags: 1 Thessolonians